Home - NorSom News
Stavanger: Koob kubadda cagta ah oo loo qabtay dhalinyaradda magaaladda Stavanger.
Norsomnews - 11. juni 2022
Daawo: Wareysi iyo warbixin ku saabsan barnaamijka dib u noqoshada xorta ah ee assistert retur.
Norsomnews - 2. juni 2022
Doorashada Norway 2021
Amal Aden: Fadumo ma rabto iney shaqeyso, Norwey wey necebtahay, balse lacagta Nav wey jeceshay.
Norsomn editor - 20. oktober 2016
Maxkamad: In Ragga bidaarta wax looga sheego, waa xadgudub.
Norsomnews - 13. mai 2022
Daawo: Isbadal intee le´eg ayaa ku yimid Af soomaaliga sanadihii ugu danbeeyay.
Norsomnews - 21. oktober 2017
Norsomnews - 17. desember 2018
FHI: Waxaa nagu soo dhow mowjad(hir) kale oo corona ah.
Norsomnews - 18. juni 2022
Norway: 758 qof ayaa khamro darteed u dhintay labo sano gudahood.
Norsomnews - 14. juni 2022
Dowlada oo baajisay imtixiinadii qaranka ee sanad -dugsiyeedkan.
Norsomnews - 12. februar 2022
DNB oo dhawaan xirayo koontooyinka dadka aan aqoonsigooda cadeyn.
Yuusuf Bootaan - 1. juni 2022
Shaqaale NAV iyo Nordea katirsan, kuna eedeysan musuqmaasuq oo la xiray.
Norsomnews - 31. mai 2022
NAV oo xeer jabin darteed 5 milyan lagu ganaaxay.
Norsomnews - 24. mai 2022